Netflix Yemahara Muedzo (2020) - Nakidzwa nemazuva makumi matatu kutenderera - Varaidzo
Ungawana Sei Mahara Netflix Muedzo?
Netflix ndeimwe yeanonyanya kufarirwa masevhisi epasirese izvozvi. Chikamu chinonyanya kushamisa nezvacho ndechekuti ivo vanopa mwedzi mumwe muedzo wakasununguka. Saka iwe unogona kuchengetedza mari uye kuwana ipapo ipapo ipapo pasina kufunga pamusoro.Kuti uve akatendeseka kwazvo, pane zvikonzero zvakawanda nei uchifanira kunyoresa kwemwedzi wakasununguka weNetflix kana usati watove!
Zvakare, zviri nyore kwazvo kutanga. Iwe haufanire kupedza maawa uchitsvaga mavocha kana macode coupon futi.Sezvinoenderana nemhedzisiro, Netflix parizvino ine anopfuura 6000 + mafirimu anotenderera uye mazana mashanu maonero ekuona.
Ivo vane zvimwe zvinoshamisa zvemukati kutenderera nekutarisa ipapo ipapo. Zvakanaka, ngatitaurei nezve mawaniro aungaita Netflix yemahara muedzo uye zvakare dzidza zvakawanda nezve chii sevhisi yeNetflix uye nemabatiro aungaita iwo mwedzi wekutanga wakasununguka. Ngatikuratidzei sei.
Nongedzera kuyeuka - hapana promo kodhi inodikanwa.
Ruzivo Rufupi NezveNetflix:
Zvakanaka, kana iwe usina zano rakawanda nezveNetflix, ngatitaurire iwe, Netflix iri chaizvo rakakura kwazvo mupi wepasirese wekushambadzira epamhepo nhepfenyuro uye mafirimu. Uyu mupi webasa akanyatso kusimbiswa kumashure muna 1997 muScotts Valley, California.Iwo mahofisi avo makuru zvino ave kunze kweLos Gatos, CA.
Kubva muna Kubvumbi 2020, Netflix yakazivisa kuti ine vanopfuura mamirioni 170 vanyoreri pasi rese (60 Million muUS moga).Vakanga vatanga nekupa zvakatsetseka maDVD nekutumira tsamba uko iwe unobhadhara mari yakatarwa uye vatengi vanogona kusarudza kubva ku100 yemazita pane maDVD & Blu-ray discs.
Nezvikwereti zvisingagumi uye pasina mari yekunonoka, haugone kutadza. Netflix iri kunyatso kuzivikanwa semutungamiri wechiratidzo muInternet media media, maererano nezviri mukati, vanyoreri, uye mari inogadzirwa. Iyo ine yakawanda yevashandisi nhasi.
Ino Netflix ine Student Discount?
Kuedzwa kweNetflix Kunotsanangurwa:
Iwe unoziva kuti kazhinji unofanirwa kushandisa inopfuura $ 100 pamwedzi nekuda kwetambo uyezve kuona mafirimu, izvo zvandiri kunzwa zvakanyanya.Iye wekupa waya webasa zvakare haambokupi iwe kunetswa mahara kana kwemahara kuyedzwa kwemasevhisi avo kungave nekuti zvinoda mari kutumira mukomana wehunyanzvi kunze kuti abatanidze kabhokisi kako panzvimbo yako.
NeNetflix kunyoreswa, zvese zvinogona kuitwa online. Zvese zvaunoda kuti uite, ingo saina uye nyoresa kune yako yemahara mwedzi iyo inokupa iwe ipapo kuwana kune yavo raibhurari. Kana iwe usingade kuenderera, bvisa iyo mwedzi wekutanga usati wapera!
Ungawana Sei Yemahara Netflix Trial?
Sezvaunoziva, Netflix ndeye pamhepo kushambadzira sevhisi iyo inopa yakakura yakakura midhiya yezvinyorwa zvemukati mukutsinhana kwemari shoma yemwedzi kubva kune vashandisi vayo Semunhu anonyorera, iwe unogona zvechokwadi kutora mukana weNetflix hombe muunganidzwa wemamuvhi, terevhizheni nhepfenyuro, zvigadzirwa zvepakutanga, uye zvinyorwa zvekutarisa kubva chero kupi, kungave komputa yako, smartphone, kana piritsi. Nekudaro, kana iwe uchinge wakavhiringika kana iwe uchida kunyatso kusaina ino yepamwedzi yekunyorera sevhisi, iwe unogona kungozviedza iko kutanga panguva yemahara yemwedzi mumwe-wekuyedza nguva.
Netflix iri kupa yemahara muedzo kwemwedzi mumwe. Kune mamwe mamiriro senge iwe unofanirwa kuve uine Kiredhiti Kadhi. Kana iwe usina chikwereti saka unogona kushandisa Netflix Chipo Kadhi.
Nhanho yekutanga iwe yaunofanirwa kuita kusarudza chirongwa. Kuti uite izvi, unofanirwa kuenda kunzvimbo yeNetflix ( https://www.netflix.com/ ) uye tinya pa Join Mahara kweMwedzi bhatani ipapo.
Mushure meizvozvo, tinya Tarisa Zvirongwa, uye wozosarudza kubva kumatatu ekunyorera sarudzo dzakapihwa pamusoro apo (Basic, Standard, uye Premium). Paunenge iwe waita yako sarudzo, tinya pa Enderera.
Mushure meizvozvo, danho rinotevera kugadzira account yako. Kuti uite izvi, zvese zvauchazoda kuisa kero yeemail inoshanda uye password. Zadzai minda, uye ipapo tinya Enderera.
Ipapo yekupedzisira nhanho kusarudza nzira yekubhadhara. Unogona kusarudza nzira yekubhadhara pakati pekubhadhara nekadhi rechikwereti kana PayPal. Mushure meizvozvo, iwe unofanirwa kuisa yako yekubhadhara ruzivo, uye tinya paKutanga kuti utange kuve nhengo yako. Iwe unozobva wapihwa-kwemwedzi mumwe mukana wekuwana kune yakazara raibhurari yeNetflix yemedia.
Iwe unogona kunyange kukanzura kunyorera kwako chero nguva panguva yekutongwa kusvika kuzuva rimwe zuva risati rapera. Iwe uchagamuchira yeemail yekuyeuchidza iyo ichatumirwa kwauri seimwe yekuwedzera chengetedzo.
Kuti ugone kuzvinyoresa kubva kunhengo yeNetflix uye kusabhadhariswa chero chinhu, gara uchiyeuka kudzima kunyorera mazuva mashoma zuva rinotevera rekubhadhara risati rasvika.
Zvakare, ramba uchifunga kuti Netflix parizvino yamira kupa yemahara kuyedza mwedzi mune dzimwe nyika, asi ivo vanopa yakakwirisa kukwidziridzwa uko iwe uine mukana wekuwana uku kukurudzirwa kwemazuva mashoma. Isu tinokurudzira kuti iwe utevere Netflix pane avo masocial network kuti uzive kupihwa kwevashandisi vatsva.
Yakawanda Sei Iyo Netflix Inodhura Mushure meMahara Kuyedzwa?
Mazhinji tambo neterevhizheni terevhizheni materevhizheni ayo anopa epurogiramu yemamuvhi anongoatamba iwo manheru uye panguva dzehusiku husiku, apo vanhu vazhinji vanoshanda vakarara.
Chinhu chakanyanya kushata ndechekuti vanongodzokorodza iwo mamwe mafirimu gumi kana makumi maviri nekudzokororazve mugore rese.Izvi zvinokusiya iwe, mutengi, uine sarudzo shoma shoma pamhando dzemafirimu aunogona kuona.
Netflix ine mazana emafirimu echinyakare uye echimanje-manje ari kudiwa, kuti utarise pese paunosangana nemanzwiro.Unganidzo yavo yese inowanikwa pasina chero miganho, mukati meNetflix yemahara kwemwedzi mumwe wekuyedza. Izvi zvinokupa iwe kunzwa kwakanaka kwezvavanopa.
Mwaka Yakazara yeiyo Yakakurumbira Terevhizheni Shows inowanikwa -
Netflix, haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti uzive zvinoitika zvinotevera pazvirongwa zvako zvaunoda sezvo Netflix ichipa mwaka wese wemapurogiramu epaterevhizheni apfuura neazvino anozivikanwa.Nhepfenyuro yekutanga yeNetflix inosunungurwawo pasina chero nguva yekumirira pakati pezvikamu izvo zviri pachena zvinoita chikonzero chikuru chekushandisa Mugovera wese kana Svondo wakagara pamberi pebhubhu!
Iko hakuna kumwe kukanganisa kwekutengesa -
Zvakanaka, saka, ese emuno uye network nhepfenyuro chiteshi vanoita mari yavo nekunyanya kutengesa kushambadza nzvimbo uye nekumanikidza iwe kuti utarise isingagumi kushambadzira kwezvigadzirwa iwe zvausingade chaizvo kutenga.Sezvaunoziva, maKushambadzira anodya anedzimakumi maviri nemashanu yenguva yako yeawa rega raunoshandisa pamberi pekabhokisi rebhokisi. NeNetflix, iwe tarisa zvaunoda kutarisa kana iwe uchida kuzvitarisa.
Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutarisa akatowanda mafirimu, TV zvinongedzo, uye zvinyorwa pasina kushandisa akawedzera maawa enguva yako yakakosha pamberi peterevhizheni!
Netflix ndeyeMubereki Shamwari -
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezveNetflix ndechekuti Mukati meakaunti yako yeNetflix, unokwanisa kuwana nhanho dzinosvika ina dzakasiyana dzekudzora kwevabereki: vana vadiki, vana vakuru, vechidiki uye vakuru.Iwo masimba evabereki anotendera iwe kuti ugadzire akasiyana profiles enhengo imwe neimwe yemhuri. Kana vasaina kuakaundi yako yeNetflix pachigadzirwa chavo, havazokwanise kuwana zvirongwa zvisina kukodzera zera ramakavapa.
Zviri pamutemo zvachose -
Hazvina kumbobvira zvakareruka kudzvanya panzvimbo dzenzizi uye kungo 'pirate' iyo chirongwa iwe chaunoda kutarisa. Kana iwe kana mhuri yako mukabatwa muchibiridzira, munogona kuitiswa mutero wakakura uye nguva yejeri.
Nepo vazhinji vedu tichifunga kuti takachengeteka kubva pakutongwa, chokwadi chiripo ndechekuti iwe uri munyasha dzemasangano nemakambani vane zvirimo, iwe pirate. Vanogona kukutonga chero nguva.
Netflix inotakurika -
Unogona kuiona zviri nyore kubasa kana foni kana piritsi. Tarisa mumotokari iwe wakamirira chero chinhu.Kuva nhengo yeNetflix kunoreva kuti iwe unokwanisa kuwana account yako kubva chero kupi, chero bedzi uine mudziyo unoenderana neInternet kubatana.Iwe unogona chaizvo kutora Netflix pazororo newe chero iwe pasi.
Muchikamu chino, takakutsanangurira zvese nezveNetflix uye mawaniro aungaita Netflix yemahara muedzo zvakare. Unogona kuwana nyore yemahara Netflix kutongwa nekushanyira webhusaiti yavo uye kusaina. Zvakare rangarira, kana iwe uchingoda iyo yemahara yemazuva makumi matatu emuedzo nguva kana iwe usiri kungogutsikana nebasa ravo zvakanyanya sezvawaitarisira kuva ipapo unogona kukanzura kunyoreswa chero nguva nguva yemwedzi mumwe isati yasvika kana zvikasadaro uchabhadhariswa.
Mimwe Miedzo Inokupa Unogona Kuda:
Prime Vhidhiyo Yemahara Muedzo
Maitiro Ekurodha pasi Twitter Vhidhiyo & maGif?
saiti yakanakisa yekuona mafirimu emahara pasina kusaina kumusoro
unowana sei mahara makadhi echipo
emahara mawebhusaiti emahara pasina kusaina kana kurodha pasi
youtube kune mp3 foni app
unogona here kutarisa netflix mahara